Gmail အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ - VidaBytes | LifeBytes
Gmail အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ
Iris Gamen | 04/05/2022 10:00 | Gmail ကို
Google ၏ Gmail extension သည် ယနေ့ခေတ်တွင် လူတိုင်းသုံးနိုင်သော အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အခမဲ့ အသုံးပြုပါသည်။ အခြားမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သော်လည်း Gmail သည် အသုံးအများဆုံးထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
ဒီနေ့ပို့စ်မှာ Gmail အကောင့်တစ်ခုကို လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဖျက်နည်းကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။. ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ တစ်ချိန်ချိန်တွင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုသော အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါစေ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပစ်လိုပါသည်၊ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော ရိုးရှင်းသောလမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ၎င်းကိုပြုလုပ်နည်းကို သင်ပြသမည်ဖြစ်ပါသည်။ .
သင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြင့်၊ ဤသည်မှာ အပြီးအပြတ်နှင့် အမြဲတမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ကို သတိပြုရပါမည်။ စကားဝိုင်းများကိုသာမက စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့် အခြားဖိုင်များကိုပါ ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။
1 Google Gmail ဆိုတာဘာလဲ။
3 Android စက်မှ အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်ပါ။
4 Gmail အကောင့်ကို PC မှ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဖျက်ပါ။
Google Gmail ဆိုတာဘာလဲ။
Gmail အပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် cloud တွင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားမည့် အီးမေးလ်များကို ပေးပို့လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။. အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ကွန်ပျူတာနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ နှစ်ခုလုံးတွင် ဤအီးမေးလ်ရွေးချယ်ခွင့်ကို သင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Gmail သည် သင့်အား အော့ဖ်လိုင်း အီးမေးလ်မူကြမ်းများအဖြစ် ရေးဖွဲ့ကာ သိမ်းဆည်းနိုင်စေပါသည်။
Gmail ၏ ကျေးဇူး၊ သင့်တွင် အီးမေးလ်များ ပေးပို့ရုံသာမက အလုပ်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းပြချက်များအတွက် ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ရန်လည်း ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ Google Meet ရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြုခြင်း။ ဤရွေးချယ်မှုကို ကုမ္ပဏီများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းအတွက် ဆက်သွယ်ရေးပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေသောနှစ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းမှတင်ပြသောအခြားရွေးချယ်စရာမှာ Google Chat ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုကို သင့်ဝင်စာပုံးတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် Gmail တွင် Google Chat ၏ ရနိုင်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးကို တိုက်ရိုက်ခံစားနိုင်သည်။
အကြံဉာဏ်အဖြစ် ငါတို့က မင်းကိုပြောမယ်။ သင့်အီးမေးလ်များကို ကောင်းမွန်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။အရေးကြီးတာတွေကို မီးမောင်းထိုးပြပါ၊ အရေးမကြီးတဲ့ အရာတွေကို ဖျက်လိုက်ပါ။ မှန်ကန်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြင့် သင်သည် သင်လိုအပ်သောအရာကို ပိုမိုတိကျပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမဟုတ်ပါက၊ နံနက်ခင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်နှင့် လူမှုကွန်ရက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းမှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဝင်စာပုံးကို ကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးပါသည်။ Gmail သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် အလုပ်ကမ္ဘာများတွင် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။
Gmail မည်ကဲ့သို့ အလုပ်လုပ်ပုံ၊ ၎င်း၏ ကွဲပြားသော ရွေးချယ်စရာများနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိသော်လည်း၊ အသုံးမပြုတော့တဲ့ အကောင့်ကို ဖျက်ချင်တဲ့အခါ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး။. စိတ်မပူပါနဲ့၊ ဒီအပိုင်းမှာ အမြန်ဖယ်ရှားနည်းကို သင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်နည်းကို သင်မသင်ပေးမီ၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးလိုပါသည်။
ပထမတစ်ခုကတော့ အဲဒါပါပဲ။ သင့်စကားဝိုင်းများကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် မက်ဆေ့ချ်များအားလုံးကို ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ သင်လက်ခံရရှိခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖျင်းရှိနေသည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အဲဒါပါပဲ။ ဤအီးမေးလ်အကောင့်သို့ သင်ချိတ်ဆက်ထားသော အဆက်အသွယ်များသည် သင်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကောင့်ကို ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီမက်ဆေ့ချ်တွေကို ဘယ်တော့မှ လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းကို ဖျက်ပါက အရေးကြီးသော အဆက်အသွယ်များကို သိမ်းဆည်းပြီး ၎င်းတို့ကို မဆုံးရှုံးစေရန် အခြား Gmail အကောင့်သို့ ပေါင်းထည့်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
မတူညီသောလူမှုရေးကွန်ရက်များ၊ ဘဏ်အကောင့်များ၊ ပေးပို့မှုပလက်ဖောင်းအမှာစာများစသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားသည့်အတိုင်း ဝင်ရောက်ပါ။ အီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။ သင်ဖျက်လိုသော ဤအကောင့်သည် အခြားပလပ်ဖောင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားလျှင် စကားဝှက်ကို မေ့သွားပါက ၎င်းကို ပြန်လည်ရယူနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုပါ။
Android စက်မှ အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Gmail အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်ခြင်းသည် Android မိုဘိုင်းကိရိယာမှ တစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ ဖွဲ့စည်းမှုစတင်ရန် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း၏ ဆက်တင်ရွေးချယ်မှုကို ဖွင့်ပါ။. configuration tab ကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့်၊ တွင်ရွေးချယ်ပါ။ အကောင့်ရွေးချယ်မှုမီနူး. သင့်စက်ပစ္စည်း၏ ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ ဤအကောင့်ရွေးချယ်မှုသည် မတူညီသောအမည်များဖြင့် ပေါ်လာနိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးပါသည်။ အကောင့်များနှင့် ထပ်တူပြုခြင်း၊ အသုံးပြုသူများနှင့် အကောင့်များ၊ အကောင့်များ သို့မဟုတ် cloud နှင့် အကောင့်များ။
အကောင့်ရွေးချယ်မှုကို သင်ရွေးချယ်သောအခါ၊ သင်နှိပ်ရမည့်အမည်တူ ဝင်းဒိုးတစ်ခုကို သင်ရလိမ့်မည်။. ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သင်ကိုင်ဆောင်နေသော စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရှိပြီးသားအကောင့်အားလုံးကို ဖွင့်ပါမည်။
ကိစ္စအများစုတွင်၊ လင့်ခ်ချိတ်ထားသော အီးမေးလ်အကောင့်များစွာ ပေါ်လာတတ်သည်။ သင်ဖျက်လိုသော Gmail အကောင့်ကို ရွေးရန်သာ ကျန်တော့သည်။. သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုအား သတိပေးထားပြီး၊ သင်သည် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့် အကောင့်ရွေးချယ်ခွင့်တွင် ရှိနေသောအခါတွင် Google ဟူသော စကားလုံးကို သင်တွေ့လိမ့်မည်၊ ၎င်းကို မနှိပ်သင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အတိုင်း ဖုန်းမှဖယ်ရှားမည့်အစား Gmail အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။
Gmail အကောင့်ကို PC မှ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဖျက်ပါ။
လုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဖျက်ပစ်ရန်၊ သင်၏ဒေတာကို USB၊ ဟာ့ဒ်ဒရိုက် သို့မဟုတ် cloud တွင်ဖြစ်စေ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သင့်အား အကြံပြုအပ်ပါသည်။. သင်သည် အကောင့်မှဒေတာများကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်ရယူလိုလျှင် ဤဒေါင်းလုဒ်သည် ကြီးမားသောအကူအညီဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဒေတာဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ၊ google အကောင့်၊ ကျွန်ုပ်အကောင့်၏ စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာသို့ သွားရပါမည်။
လုပ်နည်းမသိရင်၊ အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ သင့်ပရိုဖိုင်ပုံတည်ရှိရာ စခရင်၏အပေါ်ဘက်ညာဘက်သို့သွားကာ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။. ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာများပါရှိသောမီနူးကိုပြသလိမ့်မည်၊ သင်လိုအပ်သည်။ သင်၏ Google အကောင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို နှိပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပင်မဖွဲ့စည်းပုံကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြီးသည်နှင့် သင့်အကောင့်ဆက်တင်များအတွင်း၊ ဒေတာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ခြင်းကို ညွှန်ပြသည့် တက်ဘ်သို့ သင်သွားရပါမည်။သင့်ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိသည်။
မင်းအထဲမှာ၊ လူတိုင်းအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖန်တီးရန်၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဖန်တီးရန် အမည်ဖြင့် ကဏ္ဍကို ရှာဖွေပါ။ ပြီးတော့, ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကောင့်ကို ဖျက်ရန် ရွေးချယ်ခွင့်ကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်း၊ ဤနောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်၊ အကောင့်ဒေတာနှင့်ဆက်စပ်သော အခြားရွေးချယ်စရာလေးခုကို စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသည်။. ဒီရွေးချယ်မှု လေးခုမှာ သင်ကြည့်သင့်တာ တစ်ခုပဲ ရှိတော့တယ်။ Google ဝန်ဆောင်မှုကို ဖယ်ရှားပါ။
အကောင့်ကို အပြီးတိုင်ဖျက်ရန်၊ သင်သည် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနေသူဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းအတွက်၊ Google သည် သင်ဖျက်လိုသော Gmail အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်သည့် စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရန် သင့်အား တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။
ဤအဆင့်ကို ပြီးမြောက်ပြီး သင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုသောအခါတွင်၊ ၎င်းသည် လိုချင်သောအကောင့်ကို ဖျက်ခြင်းဆီသို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သာ ကျန်တော့သည်။
အီးမေးလ်အကောင့်ကို မဖျက်မီ အရေးကြီးဒေတာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် မိတ္တူကူးရန် အရေးကြီးကြောင်း သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အရေးကြီးသောဒေတာများ ဆုံးရှုံးသွားပါက မည်သူမျှ မသာယာပါ။ ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပြီး လွယ်ကူလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » Gmail ကို » Gmail အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲ
Gmail တွင် နေရာလွတ်လုပ်ရန် နည်းလမ်းများ
အဲဒါက ဘာနဲ့ Houseparty ကို ဘယ်လိုသုံးလဲ။